iPhone kaabta shawladda: Waraaqda ceshan iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS Data
Maxaad u baahan tahay gurmad iPhone shawladda? Waxaa la go'aansaday nooca file ah file gurmad ah. Gurmad ayaa file Lugood ma aha file ah oo caadi ah, laakiin file SQlitedb ah. Ma ahan akhrin karo. Sidaas xitaa waxaad ka heli kartaa file gurmad ah, ma waxaad ka heli kartaa waxa ku jira soo baxay waxaa ka mid ah, iskaba daa celin doonaa iPhone. Tani waa sababta ay gurmad iPhone shawladda soo baxa.
Waa hagaag, waxaa jira wax kale oo aad u baahan tahay inaad aragto. Ha u hagaagsan aad iPhone la Lugood ka dib markii aad ka heli khasaaro xogta ku saabsan iPhone. Sababtoo ah Lugood kaliya Wararka faylka gurmad mar walba oo aad u hagaagsan la, aan ah si loo dhiso gurmad file cusub. Sidaas darteed haddii aad mar kale synced aad iPhone, file ah gurmad la overwritten doona content ku saabsan iPhone, iyo xogta lumay weligiis tegi doonaa.
Waraaqda iPhone gurmad file ceshan iPhone (macruufka 9) xogta in tallaabooyinka
Hel ah iPhone gurmad shawladda hore: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) (isticmaalayaasha Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows). Labada of gurmad iPhone sahamiyayaal awood aad Macdan gurmad Lugood iyo iCloud faylka oo ku eegaan xiriirrada, SMS, sawiro, videos, jadwalka taariikhda, qoraalada iyo wac taariikhda ee faahfaahin, wax aad isticmaalayso iPhone 6s (Plus), iPhone 6 ( Plus), iPhone 5s / 5c / 5, iPhone 4s / 4, iPhone 3GS ama qoraalkii hore. Waxaad iyaga oo dhan soo kaban karto, sida ay baahidaada. Waxaa intaa dheer, Wondershare Dr.Fone ee macruufka aad u fasaxaya in iskaan ceshan xogta si toos ah uga dhan lagu daydo iPhone. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka sidoo kale waxay bixisaa soo kabashada xogta si toos ah uga dhan iPhone, iPad iyo iPod Touch, macruufka 9 taageeray. Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) Tutorial.
Waraaqda files kaga imaanayo Lugood
Tallaabada 1. Sawirka gurmad Lugood faylka
Download Free gurmad iPhone dhuuqa (la heli karo macruufka 9), rakibi iyo waxa maamula on your computer. Waxa aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa in aadan isku xiro iyo nidaamka aad iPhone la Lugood dambe ka dib markii aad xogta laga badiyay aad iPhone, si looga hortago in xogta lumay ka overwritten. Qalab kasta oo sida iPhone, iPad, iPod in aad weligaa synced la iTuness, faylka gurmad waxaa ka mid ah in la marsiiyey doonaa. Halkan waxa aad u baahan tahay in la sameeyo waa in ay doortaan qalabka file gurmad midig oo uu ku biiro "Start Scan".
Tallaabada 2. Warbixiinta raad raac ah oo iPhone iyo kabsado xogta
Halkan dhan content ee file gurmad ah ayaa la soo bandhigay, oo aad ku eegaan karo iyo fiiri mid mid. Ka dib markii xiisaha badan, ka hubi kuwa aad dib u rabto iyo ku dhuftay in "Ladnaansho" oo waxaan iyaga ku badbaadin.
Tallaabada 3. sidoo Do gurmad
Si looga fogaado ka iPhone (oo ay ku jiraan arrimo 9 qalabka) badiyay xogta, ha soo xusuusto in ay gurmad on your computer si fiican. Waa maxay ka badan, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka in ay sameeyaan gurmad ah soo saarida in talaabooyin la mid ah. Intaa waxaa dheer, software tani waxay suurtogal in aad si toos ah iskaan ceshan xogta ka iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS.
Waraaqda files kaga imaanayo iCloud
Sida kaliya ee Apple ogolaado in aad si aad u hubiso waxa xoojiyaa in iCloud waa in ay gasho website iCloud rasmi ah . Laakiin noocyada file aad heli kartaa waxay ku kooban xiriirada, mail, jadwalka, qoraalo, xusuusinta, Pages, Numbers iyo waraaqaha taabanaysa isu-diridda, iwm Haddii aad dooneysid inaad hesho files kale sida sawirada, waraaqaha derbiga, cajallado fiidyow, barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah , farriimo MMS, iMessage, ringtones, farriinta muuqaalka ah, iyo in ka badan, waxaad u baahan doona ah shawladda gurmad iCloud. Waxaad kala soo bixi kartaa version jirrabaadda kuwa aan Wondershare Dr.Fone ee macruufka ka badhamada hoose oo raac talaabooyinka si aad u leeyihiin isku day ah.
Tallaabada 1. Download gurmad iCloud faylka
Ka dib markii socda Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, dooro "kabsado iCloud ee kaabta faylasha" ka sareysa. Ku qor cinwaanka e-mail iCloud iyo password si ay u gasho oo aad iCloud. Markaasaad arki doontaa liiska iCloud files gurmad hoos xisaabtaada iCloud. Dooro mid ka mid gurmad file iyo Download button guji.
Tallaabada 2. Sawirka gurmad iCloud ku ceshan faylasha
Marka aad soo bixi gurmad iCloud faylka, waxaad awoodi doontaa in ay doortaan noocyada file ah inaad kala soo baxdo. Tani waxay hoos u dhigi doontaa waqtiga habka duuban. Ka dib markii in, button Scan guji si ay u bilaabaan. Waxa aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah. Just sugaan in mudo ah. Markaas waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan ku dhowaad dhammaan xogta ku saabsan gurmad iCloud. Dooro faylasha aad rabto iyaga oo hubinaya oo guji badhanka Ladnaansho iyaga badbaadiya, si aad u computer ama ka soo kabsadaan iyaga si toos ah u qalab macruufka.
Hard celi iPhone & jilicsan celi iPhone
Sida loo Unlock iPhone Password
Sida loo celi iPhone Password
Sida loo iPhone Network Settings
Sida loo Factory celi iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado iPad Password
Sida loo isticmaalay iibi iPhone
Sida loo isticmaalo CleanMyMac
Xasuusta Nadiifi on Mac
Sidee loo nadiifiyaa Mac
Top 5 Mac Nadiifinta Software
Top 10 Halloween Ringtones in lagu cabsiiyo Your Friends
> Resource > iPhone > kaabta iPhone shawladda: Warbixiinta ceshan iPhone Data